What Is Considered Short In Zimbabwe? - Colonel Height
What Is Considered Short In Zimbabwe?
Zimbabwean Men, 5’5 (169cm) and shorter are considered short whereas, Zimbabwean women heighted 5 feet or shorter are considered short. The average male Zimbabwean height is 172 cm (5 ft 7 in), and the average Zimbabwean women’ height is 157 cm (5 ft 2 in).
The average height of men in Zimbabwe is 5’7 (172)